Iza amin'ireo sary vongana an-tanàn-dehibe 20 no mamorona kokoa?
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-10-16
Ny tanàna tsirairay dia samy manana ny kanto ampahibemaso, ary ny sary sokitra an-tanàn-dehibe amin'ny tranobe feno olona, ​​ao anaty bozaka sy valan-javaboary, manome buffer sy mandanjalanja ny vahoaka. Fantatrao ve fa mety ho ilaina ireo sary vongana 20 tanàna ireo raha manangona azy ireo amin'ny ho avy. Ny sary sokitra «Pow ...
Firy no fantatrao momba ny sary sokitra 10 malaza eran-tany?
Firy amin'ireto sary sokitra 10 ireto no fantatrao eto amin'izao tontolo izao? Amin'ny lafiny telo, ny sary sokitra (sary vongana) dia manana tantara sy fomban-drazana ary fitazonana zavakanto manan-karena. Marbra, alimo, hazo ary fitaovana hafa dia voasokitra, voasokitra ary sokitra mba hamoronana sary kanto hita maso sy azo tsapain-tanana miaraka amin'ny cer ...
Ny mpanohitra UK dia nanongana ny sarivongan'ny mpivarotra andevo tamin'ny taonjato faha-17 tao Bristol
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-25
LONDON - Sarivongan'ny mpivarotra andevo tamin'ny taonjato faha-17 tao amin'ny tanànan'ny Britanika atsimon'i Bristol no notarihin'ireo mpanao fihetsiketsehana "Black Lives Matter" ny alahady teo. Lahatsary tamin'ny tambajotra sosialy dia nampiseho ireo mpanao fihetsiketsehana nandrovitra ny endrik'i Edward Colston tamin'ny latabatra nataony nandritra ny fihetsiketsehana tao an-tanàna ...
Taorinan'ny fihetsiketsehana ara-poko dia niongana ireo sarivongana tany Etazonia
Manerana an'i Etazonia, ireo sarivongan'ireo mpitarika Confederate sy olo-manan-tantara hafa mifandraika amin'ny fanandevozana sy ny famonoana teratany amerikana dia noravana, nopotehina, nopotehina, nafindra toerana na nesorina taorian'ny hetsi-panoherana mifandraika amin'ny fahafatesan'i George Floyd, lehilahy mainty hoditra, tany amin'ny polisy. ny fitazomana ny volana mey ...
Ahitana ny sarivongana varahin'ny filoha sy ny vadin'ny filoha ny tetik'asa Azerbaijan.
Tetikasan'ny governemanta Saudi Arabia
Ny tetikasan'ny governemanta Saudi Arabia dia misy sary sokitra varahina roa, dia ny rilievo toradroa lehibe (50 metatra ny halavany) ary ny Dunes Sand (20 metatra ny halavany). Mijoro ao Riyadh izy ireo ankehitriny ary maneho ny hasin'ny governemanta sy ny saina mitambatra ao amin'ny Vahoaka Saodiana.
Nanondrana sary sokitra varahina ho an'ny Fanjakana Mitambatra izahay tamin'ny taona 2008, izay natao manodidina ny atin'ny fehin-tsoavaly, fandrendrehana, fividianana fitaovana ary soavaly mitaingina an'ny mpanjaka. Napetraka tao amin'ny Kianja Britanika ilay tetikasa ary mbola maneho ny hatsarany amin'izao tontolo izao ankehitriny. Wha ...
Namorona sary sokitra varahina iray ho an'i Kazakhstan izahay tamin'ny 2008, anisan'izany ny jeneraly 6 H haavo 6 metatra avo lenta, sakan'ny satroboninahitra 4m ny Emperora, vorona Giant Eagle 6m avo-be, 1 logo famantarana 5m avo, 4 sombin-tsoavaly 4 m-avo, Deers 4 m-lava 4, ary Relievo mirefy 30 m maharitra 1 ...
Fanasokajiana sy maha-zava-dehibe ny sary vongana varahina omby
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-23
Tsy vahiny amin'ny sary sokitra omby varahina izahay. Imbetsaka isika no nahita azy ireo. Misy omby malaza any Wall Street malaza kokoa ary toerana mahafinaritra sasany. Ny omby mpisava lalana dia matetika no tazana satria io karazana biby io dia fahita amin'ny fiainana andavanandro, noho izany isika dia sarin'ny sary vongana varahina varahina dia tsy zahana ...
“Sary sokitra soavaly” 5 be indrindra eran'izao tontolo izao
Ny sarivongana hafahafa indrindra - ny sarivongan'i St. Wentzlas any amin'ny Repoblika Tseky Nandritra ny zato taona lasa izay, ny sarivongan'i St. Wentzlas eo amin'ny St. WentzlasSquare any Prague no reharehan'ny mponina ao amin'ny firenena. Fahatsiarovana ny mpanjaka voalohany sy mpiaro an'i Bohemia, St. Wentzlas. Ny sac ...
Famolavolana sary sokitra haingon-trano
avy amin'ny admin tamin'ny 20-07-09
Ny sary sokitra dia sary sokitra zavakanto an'ny zaridaina, izay ny fitaomana, ny vokany ary ny traikefany dia lehibe lavitra noho ny toerana hafa. Ny sary vongana voalamina tsara sy tsara dia toy ny perila amin'ny firavaky ny tany. Mamirapiratra izy io ary mitana andraikitra lehibe amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana ...
Tsingerintaona faha-50 an'ny Horse Galloping Horse nanongotra an'i Gansu, Sina
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-08-10
Tamin'ny volana septambra 1969, sary vongana sinoa taloha, ny Bronze Galloping Horse, dia hita tao amin'ny Fasan'i Leitai an'ny Dinam-pirenenan'i Han Atsinanana (25-220) ao amin'ny faritanin'i Wuwei, faritanin'i Gansu any avaratr'i Chine. Ilay sary sokitra, fantatra ihany koa amin'ny hoe Fandosiran-tsoavaly am-pandehanana eo amin'ny lanezy manidina, dia isaky ny ...
No. 561 Zhongshan East Road, Chang'an Dist. ， Shijiazhuang city Hebei provinsi ， China